Islaamka iyo Kala Dheeraynta Caruurta -
Islaamka iyo Kala Dheeraynta Caruurta
Photo Courtesy Wellshare International
Islaamku wuu ogol yahay in caruurta dhalashadooda la kala durkiyo, laakiin dad badani arintaa kama war hayaan. Islaamku wuxuu daneeyaa caafimaad qabka qofka, qoyska iyo bulshada. Qur’aanku wuxu dhiirigaliyaa in laba sanadood la naas-nuujiyo caruurta. Arintaasina waa qaab laba sanadood loogu dhaxaysiin karo dhalashooyinka caruurta. Waxa banaan in la isticmaalo qaar badan oo ka mid ah qalabka sida ku meel gaadhka ah loogu kala dheereeyo caruurta. Waa qalabka aan wax yeelada u lahayn caafimaadka hooyada, ilmaha ama aabaha. Diintu ma ogola in laga ilmo uurka ku jira laga soo rido hooyada, mana ogola in la isticmaalo qalabka aan ku meel gaadhka ahayn ee gebi ahaanba joojinaya dhalmada.
Diinta islaamku, waxay ogoshahay qalabka sda ku meel gaadhka ah uga hortagi kara qaaditaanka uurka. IUDs, implants, condoms oo dhamaantood ah qalab si ku meel gaadh ah uurarka loogu ka durkiyo ayey diintu ogoshahay in la isticmaalo. La hadal sheekh aqoon u leh diinta si aad wax uga ogaato qaababka uu islaamku ogol yahay in caruurta loo kala dheereeyo. Si aad u ilaaliso caafimaadka qoyskaaga, iyo ka bulshadaba, wakhti haboon u dhaxaysii dhalashada caruurtaada. Kala dheeraynta caruurtu waxa ay faaiido u leedahay hooyooyada, aabaha, caruurta, guud ahaan qoysaska iyo dhamaan bulshada.
Waxa aad la hadli kartaa shaqaalaha caafimaadka ama wacyigaliyayaasha caafimaadka, si aad uga hesho warbixin ku saabsan dariiqaad caruurta u kala dheerayn lahayn. Kala dheeraynta caruurtu waxa ay si fiican u shaqaysaa inta badan, marka aabaha iyo hooyadu kawada hadlaan, isla qaataan, ee ay sii qorshaystaan sidii ay dhalashada ubadkooda u kala dheerayn lahaayeen. Haayada Wellshare International ayaa warbixino kala duwan oo Soomaali iyo English ba leh, iyo shaqaale arimahaas u tababaranba aad ka heli kartaa. Wellshare diyaarbay u tahay in ay ku caawiso.
Faaiidooyinka Caafimaad ee Kala Dheeraynta Caruurta
Kala dheeraynta caruurtu waa wakhti u dhaxaysiinta dhalashadooda. Waa qaab u ogolaada ilmaha iyo qoyskaba in ay noqdaan kuwo caafimaad qaba inta aanu dhalan ilmo kale. In caruurta loo dhaxaysiiyo saddex ilaa afar sanadood ayaa ah sida ugu haboon uguna faaiidada badan. Kala dheeraynta caruurtu waxa ay bulshada iyo qoyskaba u leedahay faaiidooyin caafimaad, iyo faaiidooyin dhaqaale. Kala dheeraynta caruurta micnaheedu maaha in aad dhalmada joojiso ama aad xaddido tirada caruurtaada.
Faaiidooyin badan buu qoysku ka helaa kala dheeraynta dhalmada. Hooyada caafimaadkeeda ayay u fiican tahay maadaama hooyada umusha ahi u baahan tahay wakhti ay ku soo celiso caafimaadkeedii. Hooyada dhasha caruur aad iskugu dhawi waxa ay la kulantaa khataro caafimaad oo xaga jidhka iyo xaga maskaxdaba ah.
Sidoo kale caruurta ayay u fiican tahay in mudo dheer la naas-nuujiyo si caafimaadkoodu u wanaagsanaado. Caruurtu waxa ay helaan wakhti fiican oo ay caafimad ahaan u koraan iyo wakhti fiican oo ay waalidkood la qaataan inta aanu ilmo kale dhalan. Ugu danbayntii, kala dheeraynta caruurtu waxa ay faaiidooyin u leedahay aabaha. Aaabuhu waxa uu helaa wakhti uu la qaato caruurtiisa, xaaskiisa, iyo shaqadiisa ama waxbarashadiisa. Faaiidooyinkaas oo dhami waa kuwo wanaajiya xidhiidhka qoyska, ilaaliyana caafimaadka iyo horumarka qoyska.
Waxa aad la hadli karaa shaqaalaha caafimaadka ama wacyigaliyayaasha caafimaadka, si aad uga hesho warbixin ku saabsan dariiqaad caruurta u kala dheerayn lahayn. Kala dheeraynta caruurtu waxa ay si fiican u shaqaysaa inta badan, marka aabaha iyo hooyadu kawada hadlaan, isla qaataan oo ay sii qorshaystaan siday dhalashada ubadkooda u kala dheerayn lahaayeen. Haayada Wellshare International ayaa warbixino kala duwan oo Soomaali iyo English ba leh, iyo shaqaale arimahaas u tababaranba aad ka heli kartaa. Wellshare diyaarbay u tahay in ay ku caawiso.
Booqo www.wellshareinternational.org | Wac Abdi Ganey 612-230-3251 ama Adar Kahin 651-278-6277
Related Items:Business, Entertainment, Fashion, Featured, Health, Somali, Somali Health, Sports, Tech, world
Anti-Vaccine Movement puts Somali American kids at risk